ကလေးတွေအတွက် သံဓာတ်က ဘာကြောင့်အရေးကြီးတာလဲ | Dr Myanmar | Myanmar Medical Website
ကလေးက သံဓာတ် လုံလောက်စွာမရရင် သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးနီဥတွေ နည်းသွားတဲ့အခါ အောက်ဆီဂျင်လည်း လုံလောက်စွာမရတော့ဘဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်စေတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေ အများကြီး ရှိနိုင်ပေမယ့် ကလေးငယ်တွေမှာ အဖြစ်အများဆုံး အကြောင်းရင်းကတော့ သံဓာတ်အားနည်းလို့ဖြစ်တဲ့ သွေးအားနည်းရောဂါ ဖြစ်ပါတယ်။
>> ကလေးက ဘယ်အချိန်မှာ သံဓာတ် လိုအပ်တာလဲ? ဘယ်လောက်လိုတာလဲ?
ကလေးတိုင်းက သံဓာတ်ကို လိုအပ်ပါတယ်။ ကလေးတွေ ဖွံ့ဖြိုးကြီးထွားဖို့အတွက်လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဘယ်လောက်လိုအပ်တာလဲ ဆိုတာက ကလေးက မိခင်နို့သောက်တာလား၊ နို့ဘူးတိုက်တာလား၊ နှစ်မျိုးလုံး သောက်တာလား ဆိုတဲ့အပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်။
မိခင်နို့မှာ သံဓာတ်တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
နို့မှုန့်သောက်တဲ့ ကလေးကတော့ အသက် ၁ နှစ်လောက်အထိကို လုံလောက်တဲ့သံဓာတ် ရပါတယ်။
နို့မှုန့်ရွေးချယ်တဲ့နေရာမှာလည်း သံဓာတ်ထည့်ပြီး ပြုပြင်ထားတဲ့နို့မှုန့်ကို ရွေးချယ်ပါ။
ကလေးက ဖြည့်စွက်စာ စားပြီဆိုရင် သံဓာတ်ပြည့်ဝတဲ့ အစားအစာတွေ ရွေးချယ်ပါ။
နို့မှုန့်ရော၊ မိခင်နို့ပါတိုက်တဲ့ ကလေးအတွက်ကတော့ သူ ဘယ်လောက်သောက်လဲ အပေါ်မှာ မူတည်တာမို့ ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်သင့်ပါတယ်။
● ဖြည့်စွက်စာစားတဲ့ ကလေးဆိုရင်
ကလေး ၆ လမှာ ဖြည့်စွက်စာ စကျွေးပြီဆိုရင် သံဓာတ်ပါတဲ့ အစားအစာတွေ ရွေးချယ်ကျွေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ သံဓာတ်မှာ အသား၊ ငါးတွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သံဓာတ်နဲ့ အသီးအရွက်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ သံဓာတ် ၂ မျိုး ရှိပါတယ်။
◊ အနီရောင်ရှိတဲ့အသား (အမဲသား၊ ဝက်သား၊ သိုးသား၊ ဆိတ်သား)
◊ အစိမ်းရောင်ရှိတဲ့အရွက် စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။
သံဓာတ်ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေကို ဗီတာမင်စီ ပါဝင်တဲ့ အစားအစာတွေနဲ့ တွဲစားရင် ခန္ဓာကိုယ်က သံဓာတ်ကို ပိုပြီး စုပ်ယူနိုင်ပါတယ်။
● ဗီတာမင်စီ ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကတော့ -
◊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်း စတာတွေ ဖြစ်ပါတယ်။